त्यसैले तपाईं इन्टरनेटमा एक मान्छे भेटे। नियम, संचार को शैली थाह भयो के स्रोत निर्भर गर्दछ। अक्सर यो लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल "VKontakte", "स्कूलका साथीहरू" र विभिन्न डेटिङ साइटहरूमा छ। संचार सामान्यतया यो जस्तै सुरु हुन्छ: "हाय! कसरी तपाईं? "अथवा पृष्ठमा फोटो मूल्याङ्कन। मुख्य कुरा समय एक मूल प्रेम पत्र मा वृद्धि अलि आदिम र सुक्खा संवाद गर्न छ। संग, प्यारा बालिका सुरु गर्न नै सम्झौता। तपाईं सिक्न अघि मानिसको प्रेम पर्नु कसरी आफ्नो दैनिक जीवन विविधता एउटा तरिका - पेन, लाग्छ भर्चुअल संचार? तपाईं यो मानिस वास्तविक संसारमा पारित गरेको छ संग इन्टरनेट जानकारी बनाउने सोचिरहेका छन् कि? हामी सधैं हामी रत्तीएको जसलाई लागि जिम्मेवार छन् भनेर नबिर्सनुहोस्। तपाईं एक मान्छे पत्राचार प्रेम पर्नु र उहाँलाई झूटो आशा दिन भने - तपाईं आत्म-सम्मान जुटाउने लागि बाटो, यो तपाईं को ignoble छ र कुनै टिप्पणी आवश्यक छ।
तर तपाईं साँच्चै भावनात्मक असर भर्चुअल संचार लागि साझेदार, त्यसपछि अगाडि जाने भने! यो पत्र प्रेममा हुन सक्छ, तर आफै प्रेम बुझे गर्नुपर्छ। विशेष गरी इन्टरनेट मा, मान्छे तिनीहरूलाई प्रस्तुत छ कि छवि प्रेम पर्नु गर्छन। वास्तविक जीवन मा, यो अक्सर टाढा भर्चुअल हो। त्यसैले प्यारा केटी कसरी एक मान्छे आकर्षित गर्न को पत्राचार मा?
प्रिय बालिका, तपाईं इन्टरनेट वास्तविक जीवनमा भन्दा, एक मान्छे खुसी पार्न धेरै सजिलो छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। यो त्यहाँ मानिस संग कुनै प्रत्यक्ष सम्पर्क छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। त्यसैले तपाईं आफ्नो पोस्ट सोच्न कम र राम्रो चिन्ता छौँ।
सामाजिक सञ्जाल र जानकारी आफ्नो स्थिति ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। धेरै नै व्यक्तिगत जानकारी विकृत गर्छन भन्ने तथ्यलाई बावजुद (उमेर लुकाउने, काम वा स्कूल को काल्पनिक ठाउँ संकेत), अहिलेसम्म यसलाई त्यसो गर्न सिफारिस गरिएको छैन। तपाईं आफ्नो प्रोफाइल embellish निर्णय भने, तपाईं विशेष केहि ध्यान बिना, त्यसैले superficially मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। केही अनुसार, भर्चुअल संसारमा सानो मान्छे साझेदार को बाह्य उपस्थिति मा केन्द्रित छन्। तर यो मामला छैन। रोचक फोटो आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मा लोड गर्न प्रयास गर्नुहोस्। को उपस्थिति पछि एक व्यक्ति को भित्री गुणहरू झल्काउँछ। मानिसहरू आँखा प्रेम प्रकट गरिएको छ। मात्र banality र vulgarity जोगिन। तपाईं एउटा स्न्यापसट कामुक tinge दिन चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि यो ठीक हुनुपर्छ।
मानिसलाई कसरी आकर्षित गर्न पेन? तपाईं पहिलो नेटवर्क फोटो मा देख्यो वा सुन्दर जवान टिप्पणी गर्दै भने, उहाँलाई तिर आफ्नो सकारात्मक मनोवृत्ति देखाउन सक्छौं। उदाहरणका लागि, आफ्नो तस्वीर वा नमस्कार भन्न मूल मन पर्यो मूल्याङ्कन गर्न! एकै समयमा, यस रिपोर्ट सही माथि कोरिएका थिए हेरविचार। प्रतिक्रिया मा एक सुरिलो टिप्पणी निर्माण गर्न, ध्यान interlocutor जवाफ को अर्थ बुझ्न।
कसरी मानिस प्रेम पर्नु गर्न पेन
तपाईं मान्छे संग कुराकानी गर्न जारी राख्न र उहाँलाई मलाई प्रेम पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने महसुस गर्नु अघि, यसको बारेमा धेरै जानकारी भेला हुन्छन्। उहाँले के सोख रुचि? एक पेशेवर क्षेत्रमा संलग्न? वा केही विशेषता लागि विद्यालय बित्दै?
ठूलो तपाईं को लागि मज्जा कसरी थाहा छ भने। कलम witty मजाक हुन सक्छ वा सहवास उपाख्यान समयमा सफलतापूर्वक सम्मिलित गरियो। यसलाई आफ्नै भावना लुकाउन छैन, मान्छे ब्याज लागि महसुस भनेर महसुस।
Naturalness सधैं मानिसहरू आकर्षित। उहाँले नरमाइलो एक लाइन उहाँलाई लाग्छ, र पनि हेरविचार पढ्न चाहन्छु। खाने साथी शामिल कुन व्यञ्जन कसरी आफ्नो मनपर्ने बिरालो वा बिरामी बारेमा व्यक्ति सोध्न superfluous हुनेछ? सम्झना, सम्पर्क को अधिक अंक तपाईं एक मानिस छ, यो सजिलो तपाईं आफ्नो चासो र आपसी आकर्षण छ।
कसरी एक मान्छे पत्राचार प्रेम पर्नु गर्न? सबै मुख्य कुरा उपाय पालना। उत्तर संग तपाईं पोस्ट तान्नु हुँदैन, तर कुराकानीमा छोटो विराम स्वागत छ! ताकि तपाईंले संग पत्राचार संचार र किनभने उनको अनुपस्थितिमा को एक सानो स्नायु को संभावना आकलन गर्न अन्य व्यक्ति समय दिन!
को पत्राचार छैन के गर्ने?
भर्चुअल संचार दुःखी भन्दा मजा विषय मा ध्यान थप बनाउन। त्यसैले तपाईंलाई प्रश्नको जवाफ: "मानिस कसरी आकर्षण ? पेन" Plaintive र व्यक्ति दीर्घकालीन ध्यान राख्न असमर्थ aching। तपाईं पनि आफ्नो जीवनमा पत्राचार साझेदार द्वारा केहि बारेमा गुनासो छ भने, त्यसपछि छैन यो एक दैनिक बानी गर्छन्। आखिर, आफ्नो लक्ष्य गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ जो एक मित्र फेला पार्न बस छैन आकर्षण गर्न र एक मान्छे पत्राचार प्रेम पर्नु गर्न छ।
संचार साझेदार मा मान्छे को प्रतिक्रिया
त्यसैले तपाईंले माथि दिइएको थियो कि सल्लाह पालन गर्न खोजे। को पत्राचारका लागि रूपमा मान्छे बुझ्न? पहिले, तपाईं अपेक्षाकृत नजिक सम्पर्क बीच स्थापित भने, यो सधैं एक भावनात्मक जडान हुनेछ। यो सजिलै धेरै सकेसम्म मानिसको इच्छा बुझ्न, र अक्सर दिन भर तिमी संग अनुरूप। उहाँले तपाईंलाई प्रश्न एउटा सन्देश स्क्रिबल हुनेछ: "के तपाईं गएका छन् कहाँ" वा "म तिमी बिना नरमाइलो लाग्यो छु।"
दोस्रो, उहाँले आफ्नो विचार, चाहना र योजना तपाईं संग परामर्श गर्न साझेदारी हुनेछ। यो हामी आवश्यकता के हो! तपाईं सही ट्रयाकमा छन्। आफ्नो पत्र मा एक मान्छे बेहोश अवस्थामा, "म हाम्रो बारे सोच थियो" "हामी सँगै तपाईंसँग छन्", लेख्छन् भने "दुई", बाँकी तपाईं लगभग आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेका छौं भनेर आश्वासन दिए।
प्रलोभन को केही शब्द
एक मान्छे कसरी बहकाउने पेन? निस्सन्देह, यो राम्रो जवान, तपाईं यौन शैली मा दिन छैन जब उसलाई सामना गर्नुपर्छ भनेर शङ्का छैन हुँदा छ। यो एक मान्छे पत्राचार बहकाउने एक disarming तरिका हो। तपाईं यो कामुक ईमोटिकनहरू वा यसको कोमल भावना वा कार्य को शारीरिक विवरण रोजेपनि - स्वाद र कल्पना को एक कुरा!
एक वास्तविक सभामा कदम
कुनै पनि भर्चुअल पत्राचार - एक स्प्रिंगबोर्ड तपाईं इन्टरनेटबाट एक मान्छे सिर्फ एक राम्रो वस्तु लागि रहन चाहँदैनन् भने, पाठ्यक्रम, एक सम्बन्ध निर्माण गर्न। को सुरिलो सहभागिता गर्न Succumbing, प्रेम मान्छे आफ्नो फोन नम्बर लागि अनुरोध वा वास्तविक बैठक प्रस्ताव गर्नेछ। यो सबै आफ्नो भौगोलिक स्थान उहाँलाई र वित्तीय सक्षमता संग निर्भर गर्दछ।
एक मान्छे पत्राचार प्रेम पर्नु गर्न कसरी प्रश्न जवाफ को खोज मा, तपाईं पनि प्रेम को एक कैदी पनि thrill प्राप्त भनेर नबिर्सनुहोस्। त्यसैले, एक साझेदार संग एक बैठक अघि आफूलाई यो बारेमा थप केही आविष्कार छैन। केवल जानकारी र आफ्नो अवचेतन मा तय गर्न व्यवस्थित बाटो मा आधारित। यो सबै तपाईं भविष्यमा नकारात्मक भावना जोगिन मदत गर्नेछ! के तपाईं मोहित तपाईँको पोस्ट बाबजुद मान्छे, एउटा वास्तविक बैठक खींचती भने? पहिले, तपाईंले आफैलाई क्याफे मा खानाको लागि, तपाईं नै ईलाका बस्नुहुन्छ भने प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। दोश्रो, सावधानी यो व्यवहार को कारण पत्ता लगाउन आउट गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
सबै पछि, बलियो सेक्स को हरेक प्रतिनिधि क्षण आफ्नो वित्तीय कठिनाइ गर्न स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। कौशलता, यस सन्दर्भमा धैर्य र समझ हुन। इच्छुक प्रतीक्षा, वा छैन जो दुवै लागि मौद्रिक अर्थमा कड़ा यसको आफ्नै संस्करण, प्रस्ताव मान्छे बताउन संकोच छैन। आफ्नो नाजुक ध्यान, सकारात्मक मनोवृत्ति र कोमल ऊर्जा इमेल देखि निकलती - तपाईं भर्चुअल पत्राचार अर्को प्रेम गरे मान्छे को लागि आवश्यक अवस्था।
आफ्नो प्रिय मानिस कसरी चकित।
कुंडली, मान्छे बीच सम्बन्ध
चरण पुस्तिका द्वारा चरण: तल्ला देखि टाइलहरू कसरी हटाउने
रूसमा पारिवारिक बिदा। परिवारको दिन, प्रेम र निष्ठा
कार गर्म पाङ्ग्रा - कुनै पनि केटा को लागि सबै भन्दा राम्रो उपहार
किन पिताजी बारेमा सपना? सपना व्याख्या: के मृत पिता सपना? oneiromancy